Kazuo Ishiguro, 2017 Mubayiro weNobel Wekukunda Zvinyorwa | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Literature, Noticias
Uye pakupedzisira isu tine akahwina zvakajeka: Kazuo Ishiguro, 2017 Mubayiro weNobel Wemabhuku. Uyu munyori weBritish wekuJapan akabva akapihwa mubairo wakakurumbira maminetsi mashoma apfuura neSweden Academy.
Mushure memutongo une nharo gore rapfuura, pazvakange zviri Bob Dylan uyo akagamuchira uyu mubairo, Kazuo Ishiguro anotsiva saiti yake. Iko kwauri kwakakodzera here mubairo uyu? Iwe unofunga kuti mumwe munyori akafanirwa nazvo zvakanyanya?
Tinofanira kurangarira kuti uyu Nobel akapiwa korona dzemamiriyoni masere eSweden, idzo dzinoshandura kuita chimwe chinhu uye hapana kana pasi pe 839.000 Euros. Yakati mubairo uchaendeswa mukati Stockholm inotevera December 10.
Tevere, tinokuudza muchidimbu kuti Kazuo Ishiguro ndiani uye basa rake nderei. Wakaverenga chimwe chinhu chake here?
Iye akazvarwa munaNovember 8, 1954 mu Nagasaki, Japani.
Se yakasarudzika british pazera 6 apo iye nemhuri yake vakatamira kuEngland.
Mushure mekupedza kudzidza kukoreji akaita a Vakapedza kudzidza muCreative Literature.
Anomira pamusoro pezvose nekuda kwemanovel ake na ngano yesainzi, kuve imwe yeinonyanya kuverenga iyo ye "Usambofa wakandisiya" (2005), ane nyaya inoitika mune imwe nyika, yakafanana asi yakasiyana neyedu, munguva yekupera kwema90s ezana ramakore rechiXNUMX.
Zvinyorwa zvake zvinozivikanwa nekuve yakanyorwa mumunhu wekutanga. Vatambi vake havana kukwana zvakanyanya, uye izvi zvinoratidzwa munhoroondo dzake, zvichiita kuti muverengi avanzwire tsitsi uye vagadzire akafanana akafanana munyori-muverengi chisungo.
Iye akatogashira mibairo mizhinji inoziva basa rake rekunyora: Mubairo Booker 1989 yenyaya yake "Zvasara zvezuva" (1989). Akapihwa zvakare iyo Kurongeka kwehunyanzvi uye Tsamba ne Ministry of Culture yeFrench Republic.
Mabasa ake akatanhamara
"Nguva yemanheru" (2010)
"Russian Countess" (2005)
"Usambofa wakandisiya" (2005)
"Pataive nherera" (2000)
"Izvo zvisinganyaradzike" (1995)
"Zvasara zvezuva" (1989)
"Muimbi wepasi rinoyangarara" (1986)
"Chiedza chakachenuruka mumakomo" (1982)
Kana iwe usati wamboverenga chero chinhu chake, uri kuronga kupa mabhuku ake mukana izvozvi zvaakapihwa Nobel Prize yeMabhuku?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Kazuo Ishiguro, 2017 Mubayiro weNobel Wemabhuku